Xaflad lagu taageerayay raisalwasaare Xasan Cali Khayre dhaqaalana loogu ururinayay abaaraha Soomaaliya oo ka dhacday magaalada Västerås ee dalka Sweden
arlaadi March 12, 2017 No Comments
Xaflad si heer sare ah loosoo agaasimay ayna kasoo qaybgaleen dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Västerås ee dalka Sweden ayaa halkaas ka dhacday.
Xafladda oo lagu taageerayay raisalwasaaraha xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Khayre dhaqaalena loogu ururinayay dadka Soomaaliyeed ee ay abaartu waxyeelaysay ayaa waxaa kasoo qaybgalay waxgaradka, odayaasha, haweenka, aqoonyahanka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Västerås ee dalka Sweden.
Dadkii ka hadlay xafladaas ayaa waxa ay khudbadahooda u badnaayeen sida ay lagama maarmaanka u tahay in la caawiyo shacabka Soomaaliyeed ee ay abaartu ku aafeysay guud ahaan gobolada dalka meelaha qaarna uuba ugusii darsamay cudurka shuban biyoodka ayada oo bisha Maarso oo ah bisha ugu kululna ay mareyso kala bar.
Xafladda ayaa waxaa hadalo dhiirigelin ah kasoo jeediyay odayaal, hooyooyin iyo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Västerås ee SUF ururkaasoo dhaqaale ururin ka dhex sameeyay dadkii kasoo qaybgalay xafladda sidoo kalena ay jiraan dadaalo uu dhaqaale uga ururinayo dadka Soomaaliyeed ee magaalada Västerås si loogu caawiyo ummada Soomaaliyeed ee ay abaarta darani iyo cuduradu iskugu darsameen.
Dhanka kale dadkii ka hadlay xafladda ayaa taageeradooda u muujiyay raisalwasaare Xasan Cali Khayre kuna booriyay inuu soo dhiso xukuumad waxtar leh oo ka naxayso dadka iyo dalka Soomaaliyeed dhowrtana diintooda suuban ee Islaamka ah.
Kooxda dhalinyarada Soomaaliyeed ee Horseed oo ka dhisan magaalada Västerås oo uuna hogaaminayay macallin Janaale ayaa waxa ay goobta kusoo bandhigeen riwaayad ka tarjumeyso abaarta ka jirto dalkii waxaa sidoo kale xafladda kasoo qaybgalay fanaaniin ay ka mid ahaayeen Cali Dhaanto, Nuur Caraale iyo Jeeri kuwaasoo ayagana qayb ka ahaa taageerada loo muujinayay raisalwasaare Khayre.